Mark Cavendish သည်မည်သည့်မျက်မှန်ကိုတပ်ဆင်ထားသနည်း။ - Mark Cavendish
အဓိက > Mark Cavendish > Mark cavendish oakleys - ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများ
Mark cavendish oakleys - ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများ
Mark Cavendish သည်မည်သည့်မျက်မှန်ကိုတပ်ဆင်ထားသနည်း။
မာကု Cavendish ကဝတ်ဆင်Oakley Jawbreakerနေကာမျက်မှန်။Mark Cavendishဗြိတိသျှပညာရှင်လမ်းဆိုင်ကယ်သမား
အခြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် GCN TECH unboxing မှကြိုဆိုပါသည်။ ယခုအပတ်၌သင်တို့၏ယောက်ျားများအတွက်ရယ်စရာကောင်းသည့်စျေးနှုန်းရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနိုင်ရချင်ပေမယ့်လည်းကျွန်တော်မပါဝင်ခဲ့ဘူး။ နှစ်ခု၊ နှစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့်အလွန်ပျော်ရွှင်တဲ့ကြည့်ရှုသူသုံး ဦး ကနှစ်ခုလုံးကိုအနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Oakley အသစ်မျက်မှန်နှစ်ခုနှင့် Low Light Prizm မှအစားထိုးမှန်ဘီလူးကိုရရှိမှာပါ။
တော်တော်ကြီးတယ် ဆောင်းပါးတပုဒ်တင်စဉ်တိုင်းသင်သတိပေးချက်တစ်ခုရရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့်သေးသေးလေးကို နှိပ်၍ ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်ဟာဒီဆုကြီးများကိုရဖို့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘူး။ (လိုဂို Flick) သူတို့ကိုသေတ္တာများထဲမှမှန်သည်။
Oakley မှာဤမျှလောက်များစွာသော။ သူတို့ဝင်လာတဲ့သေတ္တာတွေတောင်မှကောင်းပါတယ်။ သူတို့မှာအရောင်နှစ်မျိုးရှိတယ်။
ထိုအခါငါတို့အတွင်းပိုင်းပျော့လုံခြုံအဖုံးများရှိသည်။ ဤအရာသည်ခရီးသွားနေစဉ်အိတ်နှင့်ပစ္စည်းများကိုလုံခြုံစွာထားရန်အလွန်အသုံးဝင်သည် သူတို့ကိုကောင်းတဲ့၊ ကာကွယ်ထားပါ။
ဒီမှာ Oakley Jawbreaker ရှိတယ်။ အထူးထုတ်ဝေ။ ငါတို့တွင်လည်း Oakley Sutros နှင့် Jawbreaker များအတွက် Low Light Prizm အစားထိုးမှန်ဘီလူးရှိသည်။
ဒါကြောင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးကားမောင်းနိုင်မယ်၊ ဆောင်းရာသီတွင်အလင်းနည်းသော Prizm မှန်ဘီလူးသည်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဆုရရှိသူတွေအနေနဲ့ jawbreaker, sutros နဲ့မျက်မှန်တစ်စုံစီရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏တွက်ချက်မှုအရ Oakleys သည်အခြားသောအခြားအမှတ်တံဆိပ်များထက် Tour De France ချန်ပီယံများထက် ပို၍ ၀ တ်ဆင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့သောအရာဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး စွာငါတို့ Jawbreaker ရှိသည်။ သူတို့ဟာနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာရှိနေခဲ့ပြီး Chris Froome၊ Mark Cavendish, Greg Van Avermaet နဲ့ Alejandro Valverde တို့၏မျက်နှာများကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိစေသည်။ အနည်းငယ်အမည်ကိုရန်။
သို့သော်၎င်းတို့သည်သာမန် jawbreaker များမဟုတ်ပါ။ Maillot Jaune ၏နှစ်တစ်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်၎င်းတို့သည် Tour De France အထူးထုတ်ဝေမှုများဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာ Maillot Jaune ဒါမှမဟုတ် Yellow Jersey ကိုဆင်နွှဲဖို့သင့်တော်တဲ့အဝါရောင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာနဲ့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ Matte အနက်ရောင်ဘောင်ရှိတယ်။
ဘေးထွက်ရှိသူတို့အားလှပသောအဝါရောင် Oakley အမှတ်တံဆိပ်အပါအဝင်။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအသေးစိတ်ကတော့ဒီနေရာမှာ Tour De France လိုဂိုပါ။ ဒီ Prizm လမ်းမှန်ဘီလူးပေါ်တွင်ထွင်းထားသည်။
Prizm သည် Oakley ၏မှန်ဘီလူးနည်းပညာကိုသတ်မှတ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်၏ကွဲပြားမှုကိုတိုးတက်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့်အသေးစိတ်များကိုသင်မြင်နိုင်သည်။ ယခု Prizm Road သည်လမ်းမကြီးအတွက်ဖြစ်သည်။ ပန်းချီကားများသို့မဟုတ်လမ်းအမှတ်အသားများကဲ့သို့သောအရာများကိုပိုမိုမြင်နိုင်ရန်အတွက်လမ်းမျက်နှာပြင်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအခြားပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် Prizm မှန်ဘီလူးများလည်းလုပ်ခဲ့တယ်။
ထို့ကြောင့် Prizm Snow ကိုနှင်းဖုံးများတွင်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ သင်မှန်းဆခဲ့သည့်အတိုင်း Prizm Golf သည်အစိမ်းရောင်လယ်ကွင်းများတွင်ဘောလုံးဖြူများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ မျက်မှန်ထဲမှာထည့်သွင်းထားတဲ့ကောင်းတဲ့နည်းနည်းအလုပ်လုပ်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအများကြီးရှိတယ်။
ဒါကြောင့်သင့်မှာလေဝင်လေထွက်အပေါက်တွေရှိတာကြောင့်အဲဒါကိုမှေးမှိန်မသွားအောင်လုပ်ထားတယ်။ Unobtainium နှာခေါင်းအပိုင်းအစနှင့် Unobtainium လည်းလက်မောင်းပေါ်။ ကောင်းပြီ၊ ၎င်းသည်ဂျိမ်းစ်ကင်မရွန်၏ blockbuster avatar ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောပန်ဒိုရာကလပေါ်တွင်တူးဖော်ခဲ့သောစိတ်ကူးယဉ်စူပါအရည်အသွေးမြင့်ဒြပ်စင်မဟုတ်ပါ။
၎င်းသည် Oak Ley ဟုခေါ်သည့်အတိအကျဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်ပေါ်လီမာဟုခေါ်သောမျက်နှာပေါ်ရှိမျက်မှန်ကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်။ ငါဆိုလိုတာကဒါကအရပျ၌ရှိနေမည်။ တော်တော်တော်တယ်
ဖြစ်ကောင်းမသာစက်ဘီးစီးဘို့။ moshing အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ (မထားဘဲရော့ခ်ဂီတ) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။
မျက်မှန်အားလုံးသည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီးခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ၁၀၀% ကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။ တိုက်ရိုက်။ နောက်တစ်ခုကိုသွား
သုတ် မင်းအေးဆေးနေတယ် စွမ်းဆောင်နိုင်သည့်နေကာမျက်မှန်များမှသင်မျှော်လင့်နိုင်သည့်အင်္ဂါရပ်များအားလုံး၌ကျန်ရှိနေသေးသည်။
ကောင်းတယ်၊ အရံမြင်ကွင်းကိုခင်ဗျားသိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကတင်ပါးနည်းနည်းလေး၊ နှင့် Jawbreaker ထက်အနည်းငယ်ပိုဒစ္စကို။ (upbeat disco music) ဤသည်မှာသူတို့ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒစ္စကိုအတွက်မဟုတ်ပေမယ့်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောသို့မဟုတ် Jawbreaker ကဲ့သို့အလေးအနက်မဟုတ်သောမျက်မှန်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ယာဉ်မောင်းသူပိုပိုပြီးလုပ်ဆောင်မှုကိုစွန့်ခွာသွားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ဤစက်ဘီးမစီးသောအထူးမျက်မှန်များသည်လမ်းအခြေအနေများအတွက်အထူးကောင်းမွန်သောမျက်မှန်များသို့မဟုတ်အထူး unobtainium polymer s များကိုမျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသည့်နေရာများတွင်သိုမဟုတ်သိုမှီးထားသည့် anti-fog များကဲ့သို့သောအရာများမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Oakley သည်လက်ရှိဒီဇိုင်းများထက် ပိုမို၍ ရန်လိုမှုနှင့်အားကစားဆန်သောမျက်မှန်ကိုတီထွင်ရန်စီစဉ်သော်လည်း၊
ရလဒ်ကတော့ဆတ်တရို။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့သူတို့ဟာ Greg LeMond ရဲ့အထင်ကရမျက်မှန်ကိုခေတ်သစ်ယူပြီးကြည့်တာပါ။ Sutros နှင့် Jawbreaker အကြားအဓိကကွာခြားချက်မှာ၎င်းတို့သည်အပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်ရန်ဒီဇိုင်းမထားခြင်းကြောင့်မှန်ဘီလူးကိုမျက်မှန်တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Jawbreaker များသည်စာသားအတိုင်းမေးရိုးကိုချိုး ဖျက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးအတွက်မှန်ဘီလူးအမျိုးမျိုးကိုလဲလှယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Prizm Low Light မှန်ဘီလူးကိုလည်းထုတ်လွှတ်သည်။ Oakley ၏အဆိုအရ၎င်းသည်သင်၏အမြင်အာရုံတွင်အရောင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိစေဘဲအလင်းရောင်နည်းသည့်အခါနှင့်အလင်းရောင်တွင်ပင်အသေးစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဆုနှစ်ခုပဲရှိတာဆိုတော့တတိယမြောက် set ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သိမ်းထားလို့ရတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ငါအစောပိုင်းကစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး? လူမိုက် ဘာဖြစ်ဖြစ်။ ယခုသင်စောင့်ဆိုင်းနေသောအပိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
ငါဘယ်လို M ရနိုင်သလဲမင်းမှာဒီထူးဆန်းတဲ့ Oakley နေကာမျက်မှန်တပ်ထားလား။ ကောင်းပြီ၊ တကယ်လွယ်တယ်။ အောက်ဖော်ပြပါဖော်ပြချက်ရှိလင့်ခ်ကိုသာ နှိပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေးကမ်းခြင်းစာမျက်နှာသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်။ သင်ဤထူးသောဆုများကိုရယူနိုင်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
ပြီးတော့ဒါကလုံးဝအခမဲ့ပါ။ သင်လုပ်ပြီးတာနဲ့ GCN ဆိုင်ကရပ်ပါ။ ငါတို့လူသားတွေအတွက်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးတီရှပ်တွေရှိတယ်၊ ငါ့ရဲ့လက်ရှိအကြိုက်ဆုံး၊ အထူး Alpe d'Huez ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော Dutch Corner နှင့်ပြည့်စုံသောအလွန်အေးအေးဆေးဆေး။
အကယ်၍ သင်နောက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်လိုပါက Oakley သည်စက်ဘီးစီးခြင်း၌ကြီးမားသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Oakley တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောထိပ်တန်းဒီဇိုင်း ၇ ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါးဖြစ်သည်။
မာကု Cavendish ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ
ကဗျာ၂၀၁၇ Tour de France ဇာတ်စင်လေးတွင် Peter Sagan နှင့်ပြိုကွဲခဲ့ပြီးသူ့ကိုပြိုင်ပွဲမှမောင်းထုတ်ခဲ့သည်။ကဗျာသူသည် EpsteinBarr ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်သြဂုတ်လအထိရလဒ်ကောင်းများ ဆက်၍ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
MARK CAVENDISH: ၂၀၀၂ မှာ Servais Knaven အနိုင်ရခဲ့သည့် Roubaix ဟာမိုးရွာတာနဲ့သူတို့ညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုတာမှတ်မိနေတယ်။ ထိုအခါယောက်ျားလေးများကျဆင်းခဲ့သည်။
Knaven ပစ်မှတ်ကိုချွတ်ဝေးဝေးလမ်းလျှောက်ခဲ့သည်။ သူကသာဘယ်တော့မှသည်သူ၏ကျဆင်းသွားထံမှ, ဒီအနိမ့်အနေအထားရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့သူက velodrome ကိုလာပြီးအခုကျွန်တော့်အသင်းကိုစပွန်ဆာပေးဖို့သူ့ဂျာစီကိုထိုးလိုက်တယ်။
အဲ့ဒီတုန်းက Etixx Quick Step မဟုတ်ပေမယ့် Quick Step ပဲ။ ထိုမင်းသည်အနိုင်ရခဲ့နှင့်တော်တော်လေးအေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ဟာဂန္ထဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။
နီကိုတင်းနိုက် mononucleotide အစားအစာရင်းမြစ်များ
တစ်နေ့ငါ Roubaix အနိုင်ရ ငါဟာငါမျှော်လင့်ထားတဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါ။ ငါသူ့ကိုတွန်းလှည်းတစ်ချောင်းသာမောင်းခဲ့တယ်။
ထိုအ Johan Museeuw ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျောက်ပြားပေါ်တွင်အနည်းငယ်သာတက်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်ဂျိုဟန်မူဆွေဟုအမြဲဟန်ဆောင်လိမ့်မည်။ သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့သုံးလေးနှစ်ကသူ့ဆီလာပြီးသူကငါ့သားပြေးနေပြီလို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကသူ့ရုပ်တုပဲ။
ထိုအခါငါကဒီထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ထင်နှင့်ငါကဒီပုံပြင်ကိုပြောသည်။ ငါကွဲပြားခြားနားသောဒေသများကွဲပြားခြားနားသောခံစားချက်များကို, သူတို့အထင်ကရဖြစ်လာဘာကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်ကိုဖော်ပြထင်ပါတယ်။ ယခုစက်ဘီးစီးခြင်း၏အမြင်မှာ၎င်းသည်တိုးတက်နေသော်လည်းသင်ကထိုအစဉ်အလာကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
Roubaix ရှိသုံးရောင်ဂျာစီနှင့် Moser ၏အထင်ကရရုပ်ပုံများကိုသင်တွေ့ရသည်။ ဤဂျာစီအမျိုးအစားသည်မြင့်တက်နေပြီးသူသည်မိမိ၏သိုးမွှေးဘောင်းဘီတိုများကိုဆိုင်းထိန်းထားသူများကိုတားဆီးထားသည်။ စက်ဘီးစီးခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးအများဆုံးအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည့်အချိန်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်သည်။
ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအထင်ကရအမှတ်တရများသည်ဤနှစ်များမှလာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအရာများသည်ပုံပြင်များဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ Tuscany တွင်ရှိနေပြီး Coppi နှင့် Bartali မှပုံများ၊ သူတို့သည်သမိုင်းဝင်ပြီးအထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။ ဒီဟာကအားကစားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘဝနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်တယ်ထင်တယ်။
ဟုတ်တယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်ခုနစ်ဆယ်က။ အရာအားလုံးမှယူရန်ဤမျှလောက်ရှိပါသည်။ Eddy Merckx စီးနင်းလာသောအခါသူမစဉ်းစားခဲ့ဘူး, ယခုငါထို့နောက်ထိုသိုးမွှေးဘောင်းဘီတိုရှိသည်။
သင်ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါသူတို့ကတော်တော်လေးခက်တယ်။ နှစ်များတစ်လျှောက်စီးနင်းသူအများစုသည်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုသာနှစ်သက်ကြသည်ဟူသောအချက်တူညီချက်ရှိသည်။ စက်ဘီးတစ်စီးပေါ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တွန်းအားပေးရန်နည်းလမ်းများရှိပါသည်။ အခြားအားကစားနှင့်အခြားအားကစားများတွင်သင်ပါဝင်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်မခံစားရပါ။
ကျွန်တော်စက်ဘီးစီးစလုပ်တဲ့အချိန်မှာနယ်ပယ်တစ်ခုထက်မကပါဘူး။ လူအတော်များများကလုံးဝထိုသို့ပြုကြသည်။ အခုဆိုယူကေမှာစက်ဘီးစီးတာအရမ်းများလာတာတွေ့ရတော့အံ့သြစရာပဲ။
အဲဒါရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုခံစားရတာအံ့သြစရာပဲ။ လူများသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကပြုလုပ်ကြသည်။ လူများသည်အားကစားနောက်သို့လိုက်ကြသည်။
၎င်းကိုလူအများနှင့်ဆက်နွယ်သောအလုပ်လူတန်းစားအားကစားတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ဆဲဖြစ်ပြီးသင်ယခုသင်လုပ်သင့်သည်ကိုလုပ်သင့်သည်ဟုဆိုသည်။ တော်တော်ရယ်စရာကောင်းတယ် သင်လုပ်သောလူများထံမှသင်ရသည့်အရာတစ်ခုမှာသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့လေးစားတန်ဖိုးထားနိုင်သည်။
ရှေးရှေး - လူတစ်ယောက်ကစက်ဘီးစီးတာ၊ တီဗွီမှာမကြည့်တာမျိုး၊ စက်ဘီးဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိကြဘူး။ သင်အလုပ်သို့ပင်ပြောင်းရွှေ့သည်ဖြစ်စေ၊ မိသားစုဝင်များနှင့်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။ ခြေနင်းခြင်းကိုသဘောပေါက်ခြင်းသည်ပြင်သစ်ကို ဖြတ်၍ ၃၅၀၀ ကီလိုမီတာခရီးကိုအဘယ်သို့ရောက်နိုင်သည်ကိုသင်စိတ်ကူးနိုင်သည်။ သငျသညျ 200 ခန့်စက်ဘီးပြိုင်ပွဲများတွင်မရထိန်းချုပ်ထားပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသည်။
variable များ၏နံပါတ်နီးပါးအဆုံးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အသက်တာ၌ဖြစ်စေ၊ စက်ဘီးစီးသည်ဖြစ်စေပြောင်းလဲမှုများကိုသင်ဂရုစိုက်ပါကအရာအားလုံးသည်သင်၏လမ်းအတိုင်းသွားသည်။ ငါပြိုင်ပွဲတစ်ခုအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းမှာအောင်မြင်မှုပိုကောင်းလိမ့်မယ်။
စက်ဘီးစီးခြင်း၏အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆွေးနွေးငြင်းခုံ။ စက်ဘီးစီးသူတစ် ဦး အနေနှင့်သင်သည်အရာရာပြောင်းလဲသွားသည်ကိုသင်အမှန်တကယ်မမြင်လိုပါ။ သူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ကြီးမားတဲ့ခရီးတွေကိုကြည့်ချင်ကြတယ်။
သူတို့ဟာဂန္တ ၀ င်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်၊ နှစ် ၁၀၀ ကျော်သွားပြီ။ နောက်ဆုံးမှာတော့အားကစားအများစုက World Series လိုမျိုးများသောအားဖြင့်ကြည့်ရတာအရမ်းလွယ်တယ်။ ထိုအခါငါက ဦး တည်ချက်အတွက်သွားကြဖို့ရှိပါတယ်ထင်ပါတယ်။
Mark Cavendish မှာဘာရောဂါရှိလဲ။
ထိုနှစ်၏နွေ ဦး ရာသီတွင်သူသည် Epstein-Barr ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသည်နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းကြောင်း 2019 မေလသည်အထိတဆင့်သူ့ကိုချွတ်ခြင်းနှင့်အပေါ်ချက်ချင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သူ့ကိုထားခဲ့တယ်။၂၆ 2021 ။
Mark Cavendish သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးစဉ်တွင်လား။
Mark Cavendish,ဗြိတိန်နိုင်ငံအချိန်တိုင်းတွင်အအောင်မြင်ဆုံးစီးနင်းသူနှင့်သူ၏အသင်းဖော် Steve Cummings ကို OVO Energy အတွက် Team Dimension Data ၏ ၆ ယောက်မြောက်လူစာရင်းတွင်ယနေ့ထည့်သွင်းခြင်းခံရသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးစဉ်။
Mark Cavendish သည် Tour de France တွင်ရှိနေသေးသလား။
Mark Cavendishအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ကအချိန် 11 စင်မြင့်ပေါ်ဖြတ်ပြင်သစ်နိုင်ငံခရီးစဉ်2021, ဒါပေမယ့်လုကာ Rowe လုပ်မပေးခဲ့ပါဘူးကအချိန်မီပြီးပါပြီနှစ်
၂၀၂၁ ခုနှစ် Tour de France တွင် Mark Cavendish ရှိပါသလား။
ပြင်သစ် 2021 Tour de:Mark Cavendishတ ဦး တည်းအတွင်းရွှေ့ဖို့ 33 အဆင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်၏All- အချိန်စံချိန်။၃
ဝါရင့် Sprinter မာကုကဗျာဖြစ်လိမ့်မည်စီးနင်း၂၀၂၁ Tour de France၊ ၃၆ နှစ်သည်ဒဏ္theာရီသို့ပြန်လာခဲ့သည်ပြိုင်ပွဲသုံးနှစ်ပျက်ကွက်ပြီးနောက်။၂၂ ။ 2021 ။
Tour de France တွင် Cavendish သည် ၂၀၂၀ တွင်ရှိပါသလား။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ: မာကုကဗျာဇာတ်စင် 10. မာကုအတွက် 33rd အနိုင်ရရှိနှင့်အတူစံချိန်အပေါ်ပိတ်ကဗျာမိမိအနတ်သမီးပုံပြင်ပြန်လာဆက်ပြောသည်ပြင်သစ် Tourဘယ်လ်ဂျီယံအမျိုးသားချန်ပီယံ Wout Van Aert ကိုချန်ထားခြင်းအားဖြင့် Valence မှာပါကသူ့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ 33th အဆင့်အနိုင်ရရှိကပြိုင်ပွဲ။၃
Cavendish သည် Tour de France 2021 ရှိပါသလား။
ပြင်သစ်နိုင်ငံစက်ဘီးစီးခြင်း2021- အဆင့် ၁၀ - မာကုကဗျာ33nd လုံခြုံ။ ည့်သည်စံချိန်တင်ဖို့ပိုမိုနီးကပ်စွာရွှေ့ဖို့ဇာတ်စင်အနိုင်ရရှိ။3 ရက်အကြာက
Mark Cavendish သည် Tour de France ၏အဆင့်မည်မျှရရှိခဲ့သနည်း။
ကဗျာယခုမှ 32 အထိဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဇာတ်စင်အနိုင်ရရှိ, နှစ်ရက်အစောပိုင်းကစိတ်ခံစားမှု 31st ကောက်ယူတော်မူပြီးမှ။ ဖြစ်ရပ်ဟုတ်တယ်မတွေ့ပါသို့မဟုတ်မရနိုင်ပါ ဘယ်လောက်နှစ်ခုမေးသောအခါအနိုင်ရရှိသည်နှိုင်းယှဉ်ကဗျာသူသည်ပြိုင်ပွဲ၌သူ၏အစောပိုင်းအောင်မြင်မှုကြောင့်စိတ်အားတက်ကြွစေခဲ့သည်ကိုဝန်ခံခဲ့သည် ကျနော်တို့ (ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်) ယုံကြည်မှုရတယ်အနိုင်ရ) ။02.07.2021